Weerar tuulo lagu gubay oo markale ka dhacay deegaan katirsan gobolka Lamu.
Wednesday January 12, 2022 - 12:10:07
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in markale weerar culus lagu qaaday deegaan katirsan gobolka Lamu ee xeebta ku teedsan.
Xoogag jihaadi ah oo aad u hubaysan ayaa weerar habeen dheelmad ah ku qaaday deegaan kaabiga ku haya magaalada Mpeketoni ee istiraatiijiga ah.
War rasmi ah oo kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamadoodu ay howlgal ka fuliyeen tuulo 9Km ujirta Mpeketoni "Mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaan katirsan gobolka Lamu, waxay gubeen guryo ay deganaayeen dad gaalo ah Mooti iyo agabyo kalane way soo qaniimeysteen" ayaa lagu yiri war ay baahisay Andalus.
Dhinaca kale warbaahinta maxalliga Kenya ayaa soo warisay in dagaalyahanno katirsan Al Shabaab ay galeen tuulo ku dhow Mpeketoni islamarkaana ay dab qabadsiiyeen inta badan guryihii tuulada ayna gacanta ku dhigeen hanti ay lahaayeen dadka Kenyaanka ah ee lagu deegaameeyay gobolka Lamu.
Saraakiisha ammaanka Kenya waxay sheegayaan in tan iyo billaawgii bishan weeraro ka dhacay gobolka Lamu lagu dilay illaa 13 ruux oo 4 katirsan ay yihiin ciidamada booliska ee GSU loo yaqaan.
Askar Baardheere lagu dilay iyo saldhigyo ay ku sunaayeen ciidamo shisheeye oo la weeraray.
Mas'uul katirsan maamulka degmada Kaxda oo ku dhintay qarax miino.
Weerar 8 gaari lagu gubay oo ka dhacay deegaan katirsan gobolka Lamu.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo ku dhintay Weerar Muqdisho ka dhacay.
Mas'uul katirsan Golaha Melleteriga Suudaan oo socdaal ku tagay Addis Ababa.